Akkamitti galma geenna? – Wiirtuu Odeeffannoo Muslimtoota Oromiyaa
Yeroo qalbii fii Qaama guutuun Diina irratti Xiyyeeffannee socho’aa jirrutti, gochootaa fii jechoonni yaada nama harkaa bittinneessan yeroo mul’atan walumaan argaa jirra. Sunis dhimma Alaabaa #KWO waan wal-qabateedha.
Akkuma beekkamu Sabni Oromoos akkuma saba biroo kamuu, dhaabbilee hedduu qaba. Dhaabni kumuu yeroo hundeeffamu, Faajjii fii Alaabaa isaa bocatuun wal nama hin gaafachiisu, akkasums, Osoo Alaabaa fii Faajjii isaa hin qopheeffatin, deeggartoota hagam horachuu akka danda’uu fii namni hagam miseensa isaa tahuu akka danda’u, dabalataanis sagantaa isaa bifa kamiin akka miseensaa fii deeggartoota isaatiif ibsu, erga qoratee lafa kaayateen booda hujitti seena.
Kaayoo fii adeemsa dhaaba kamiiyyuu kan ittiin madaaluu dandeennu hujiidha. Yoo hujiin dhaaba sanii bu’a qabeessa tahe, miseensi isaa babal’ataa deema, itti amanummaanis dabalaa deema. Akkasumas, yoo dhaabni dhaani sun waadaa Ummataaf gale bakkaan gayuu irratti rakkina qaba jedhee, ummanni itti amanummaa isaa irraa mulqe, yeroo kanatti dhaabni kun bu’a dhabeessa jechuun, warroonni Amantii dhaabicha irraa dhaban dhaaba biraa uumachutti fuulleffatu.
Kana jechuun yaadatu gara gara tahe jechuudha malee, waan wal jibbiinsatti nama geessu hin qabu. sababni isaas mirgatti amanna yoo tahe, eennumtuu dhaaba ufii barbaade dhaabbachuu ni danda’a, akka ufii barbaadettis socho’uu ni danda’a. garuu mirga jedhee dhaaba biroo kan ulaagaa isaa waliin hin deemne, arrabsuu hin danda’amu. Yoo wal’arrabsuu fii wal’jibbiinsa kan aadaa godhannu tahe, akkamiin galma gayuu dandeenna? Natu sii beekaa fii Ana malee hint ahu yoo waliin ka jennu taate, hagam waliin tarkaanfachuun danda’ama?
guyyoota lamaan dabran kana keessa, waan gurri nama dhagayuun hin malleetu, dhagayamaa jira. Deeggartoonni garee lamaa jechuun #ABO fii #KWO jechoota hin taaneen yeroo wal darbatan argina. Eennutu dura eegalee dubbachuun bu’a qabeessa natti hin fakkaatu, garuu wanni gara lachuuyyuu argaa jirru waan nama suukaneessuudha!
Hundeen rakkinichaas Alaabaa irratti waan rarra’uudha. kun garuu waan sadarkaa kana gubbaan nama gayuun malu tahuun hin malle. Alaabaan gaafii taatee argamte, Alaabaa Dhaaba KWO ti, yoo dogongoruu baadhe, kuni waan dubbii tahuun malee miti, akka ilaalcha kiyyaatti. Sababni isaas Alaabaan kun isa jalqabaa, yookaa ta dhumaatii miti, tarii uf duras kan biroos, dhaaba biraa dhaabbatee Alaabaa biraatiin gadi dhufutu mala.
Alaabaa kana malee ka biroo bocuu hin dandeettu yoo waliin jenneen immoo, dubbiin asitti natu siif beekaa, ta’ani jedhe malee, tee hin taatuu, taatee argamti. yeroo kanatti mirga qaama kanaa dhiibne/miine ta’a. Dhugaa dubbachuudhaaf, hanga ammaatti, Alaabaa dhaabbilee malee Alaabaan tuni Alaabaa (Oromiyaa) ti jedhamee irratti walii galamee seeraan lafa kaayame hin jiru. Garuu kan dhaabbileen bocatanii lafa kaayatan yoo xiqqaate 7 oltu jira. Isaan keessaa 3 maqaa yoo dhaye:
o Alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo.
o Alaabaa Kongiresii Federaalawa Oromoo.
o Alaabaa Kallacha Walabummaa Oromoo.
Alaabaaleen kunniinii fii kan ani maqaa hin dhayinis, cuftuu Ilmaanuma Oromootiin kan bocamaniidha. Eennunuu fudhatama kenninee fii eennunuu fudhatama hin qabdu jechuunii hin dandeennu. Hawaasni kan laalu nama bu’aa isaa fidu malee, kan alaabaa goototaati jedhee, harkatti maratee waggaa cufaa bakkuma takka dhaabbatuu fii kan Alaabaa haaraya Bocatee osoo hujitti hin hiikin irra rafuu miti!
Walumaa galatti ka nuti laallu, Alaabaan moofaa tahee fii haaraya tahee osoo hin taane, eennutu hujiin mul’isaa jiraadha. Kana Irratti immoo, wanni beekuu qabnu mootummaan tokko yeroo filatame, kaayoo isaa hujitti heekuuf wantoonni isa barbaachisan, heddu waan jiraniif, yeroo mur’taa’e laachuniif dirqama natti fakkaata, Osoo tolinnaa fii hammeennummaa isaa itti hin murteessiniin dura.
Kanaafuu wanni ani jechuu barbaade, wanta Kana laafamatti qabbaneessuu fii nagaya waarayaafii akkasumas qabsoo biyya keessaa irratti xiyyeeffatuuf, akka muuf mijjaayuuf, ammas hawaas jidduu wal jibbaa fageessuuf, fedhii deeggartoota garee maqaa Oromiyaa Bilisomsina, Walaboomsina/birmadoomsina jechuun socho’u kamuu, mirgaa isaanii teeysuun yoo sochoone qofa.
Kunis akkamitti isa jedhuuf. Haasofni waa’ee Alaabaa Asumatti dhaabbatuun abbaan fedhe dhaaba isaa jalatti gurmaayuun, jiruu hawaasummaa fii Oromummaa waliin oofatuu qaba. Kunis kan tahuu danda’u:
walgayiin hawaasaa kan waloo kumuu, guutuu Dachee Adduniyaa irratti yeroo adeemsifamu, Alaabaaleen Kunniin lameenuu bifa walqixxummaatiin, waltajjicha irrattis tahee, galma keessattis qeeqe tokkoon malee mul’achuu.
Hiriira taasifamu kam irrattuu, Cuftuu Alaabaa bakka na bu’a jedhee amanu qabatee akka bahu mirgi isaa qeeqa takka malee eeggamuu.
Aartistoonni Oromoo Bakka akkanaa Kanattii Uf eeggannoo cimaa taasisuun, osoo garee kamiifuu hin loogne, waan hawaasa walitti dhiheessu Irratti fuulleffatuu qabu.
Fala kana fiduudhaaf immoo, Dura bu’oonni, waldayaalee Hawaasa Oromoo Biyya cufa keessatti argaman waan kana irratti hojjachuudhaan, shoora guddaa taphatuu qabu. Kuni hin taane taanaan, dubbiin akka gariin keenna itti hubannutti osoo hin taane, waan nuti jibbinu kan gabrummaa keennas dheeressutu nutti dhufuuf taa’aa natti fakkaata akka nama tokkoottii!
Sababni isaas, natu siif beekaan yoo calaqqifte jibbana eda’aa deemti waan taheef.
Gaazexeessitootaa fii Aktiivistoota, dhaaba kam Irraayyuu walaba taataniif.
Gaazexeessaa jechuun, Ergamaa (messenger) jechuudha. Ergamaan dhugaa/haqaa, dubbii jirtu qofa, osoo itti hin eda’in osoo irraa hin ir’isin, dhaamsa isaa bakka gayuunii baarbaaduun gaya. Kanaafuu, waan barreessinuu fii dubbannu keessatti, Osoo garee kamiiyyuu hin loogne, tamsaasuun dirqama tahee argama.
Akkasumas, Aktiivistoonni, waan hawaas keessatti dhalate, yeroodhaan furuuf jecha, maal gochuu akka qabnuu fii bifa kamiin dubbatuu akka dandeennu irratti xiyyeffachuu qabna, Osoo hin dubbatiniin dura. Eennuyyuu tanaan osoo madda waldhabiinsaa Garee wal dhabe lamaan irraa hin hubatin, Oluma kaanee Murtii yookaa Deebii kan laannu taate, tarii akkuma namaa dhuftee fii namatti fakkaatte, yoo dubbanne, Ibidda irratti Gaaza dhangalaasuu taha. Kanaafuu waan dubbannuu fii barreessinu gadi fageennaan laaluun dirqama.
Oromiyaan ni Walaboomti
Alaabaan gargar nu hin Qoodu.
Kaabaa fii Kibbatti, Bahaa fii Dhihatti.
Isin Jaaladha Oromoo tiyya!
Ani Bakkalcha Bariiti.